असह्य भएपछि सरकारविरुद्ध उत्रिए साउदीका अलपत्र नेपाली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
‘सात महिनादेखि काम नपाएर अलपत्र छौं । एउटा कोठामा ११ जनालाई कोचेर राखिएको छ । भुइँमै सुताइएको छ । पुग्ने खाना दिँदैनन्, थपेर खान पाइँदैन । खाना नपुगेर सधैं झगडा हुन्छ । कहिलेकाहीँ नुहाउने पानी नै पिउनुपर्छ ।’
भाद्र २४, २०७७ होम कार्की
काठमाडौँ — साउदी अरबका विभिन्न क्याम्पमा रहेका सयौं नेपाली श्रमिक घर फर्कन नपाएको भन्दै नेपाल सरकारविरुद्ध उत्रिएका छन् । ७ महिनादेखि कामविहीन भई बसेका उनीहरूले स्वदेश फिर्ती अनिश्चित भएपछि पर्याप्त उडानको माग गर्दै विदेशी भूमिमा आफ्नै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् ।
छौं तर उताबाट उडान स्वीकृति नै मिल्दैन,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत डा. महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘नेपाल सरकारले उडान पठाइदेओस्, हामी मान्छे पठाइदिन्छौं ।’
साउदीको रियाद र जेद्दास्थित विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सले र दमामबाट हिमालय एयरलाइन्सले उद्धार उडान गर्ने अनुमति पाएका छन् । दूतावासले नामावली सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै दमाम र रियादस्थित अधिकार प्राप्त ट्राभल एजेन्सीमा टिकट लिन जाने क्रम बढेको छ । भीड बढी हुनेबित्तिकै प्रहरीले ट्राभल एजेन्सी नै बन्द गरिदिने गरेको छ ।
साउदी अरबको राजधानी रियादको वथाहस्थित स्थानीय ट्राभल एजेन्सीमा नेपाली एयरलाइन्सको टिकट काट्न लाइनबद्ध नेपाली श्रमिक । तस्बिर सौजन्य : सुरेशराज त्रिपाठी
उडान संख्या कम भएकाले पनि दूतावासले एउटै कम्पनीका श्रमिकलाई एउटै उडानमा मात्रै पठाउन सकेको छैन । ‘कतिपय कम्पनीले नेपाल एयरलाइन्सको विमान चार्टर गर्न चाहे लाग्ने शुल्क रियादमा भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध छैन । त्यसका लागि कम्पनीले नेपालमै पैसा पठाउनुपर्छ,’ राजपुतले भने । उनले कम्तीमा तीन महिनाको उडान तालिका सार्वजनिक गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले भने केही दिनअघि मात्रै तालिका सार्वजनिक गर्दै आएको छ । छोटो समय दिँदा सबै प्रक्रिया
पूरा गरेर यात्रु पठाउन निकै समस्या हुने गरेको नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीलाई मंगलबारको उडानबारे शुक्रबार मात्रै जानकारी आयो । यसबारे कम्पनीलाई शनिबार जानकारी दियौं । कम्पनीले आइतबार नै एयरलाइन्सको एजेन्टको खातामा टिकट खर्च पठायो । साउदीबाट प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा ५ दिन लाग्दोरहेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘समयमा सूचना नआउँदा तोकिएको उडानमा यात्रु पठाउन कठिन भइरहेको छ । फेरि यात्रुको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट पनि जुटाउनुपर्‍यो ।’
सेनाको सहजता हेर्दा कामदारलाई मर्का
स्वदेश फर्किनेको व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई सजिलो हुने हिसाबले मात्रै स्वदेश फिर्नेको कोटा निर्धारण गरिएको पर्यटन मन्त्रालयको बुझाइ छ । कोटा निर्धारण गरिएकाले साउदी दूतावासले मागेअनुसार उडान राख्न नसकेको नेपाल एयरलाइन्सले जनाएको छ । सरकारले विदेशबाट दिनमा ८ सय जना मात्रै यात्रु ल्याउन पाउने निर्णय गरेको थियो । ‘दिनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १५ वटा एयरलाइन्स कम्पनीमार्फत ८ सय जना मात्रै यात्रु ल्याउने अधिकार छ । साउदीको मात्रै माग पूरा गर्न दिनमा ५ वटा उडान गर्नुपर्छ,’ नेपाल एयरलाइन्सका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उडान सीसीएमसीले निर्धारण गर्ने हो । हामी एउटा अपरेटर मात्रै हो । जति उडान दिन्छ, त्यति बोक्ने हो ।’
ती अधिकारीका अनुसार कम उडान हुँदा एजेन्टहरूबीच चलखेल ओपन भइरहेको छ । ‘टिकटको कालोबजारी रोक्न उडान संख्या नै बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले टिकट काट्ने बेला नै होटलको खर्च पनि लिन लगाएको थप समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘दूतावास र हामीबीच समन्वय भइरहेको छैन । हामी यात्रुको पीसीआर नेगेटिभ आएको रिपोर्ट खोज्छौं । यसो हुँदा यात्रुलाई होटलमा राख्नु पर्दैन । त्यसमा एक जना मात्रै यात्रुको पीसीआर नेगेटिभ नभए सबै यात्रुलाई ७ दिनसम्म होटलमा राख्ने जिम्मेवारी एयरलाइन्सको हुन्छ । त्यसो हुँदा २०–२५ लाख रुपैयाँ खर्च एयरलाइन्सले बेहोर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
‘तालिकाअनुसार उडान आइदिनुपर्‍यो’
उडान तालिकाअनुसार आउँदैन । विमानस्थल पुगेपछि मात्रै उडान छ कि छैन थाहा हुन्छ । उडान हाम्रो हातमा पनि छैन । जान नपाएकाले आफ्नो बासस्थानभित्र जिन्दावाद, मुर्दावाद भनिरहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी नाजुक अवस्था साउदीमा छ । टिकट लिन १२ सय, १५ सय किमि टाढाबाट श्रमिक दाजुभाइ आउँछन् । उडान उपलब्ध नहुँदा उनीहरूले दुर्दशा भोग्नुपरेको छ । यहाँबाट विदेशी उडान छैन । स्वदेशी उडानमा मात्रै भर पर्नुपर्छ । साउदी एयरको व्यवस्था भइदिएको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो । घर जाने श्रमिकको संख्या धेरै छ । अन्य देशबाट विदेशी उडान पनि जान्छ । हामीसँग विकल्प भएन ।
विकल्पहीन अवस्थामा दिइएको उडान नआउँदा झन् विकराल समस्या उत्पन्न भइदियो । सबैभन्दा कठिन नियोग साउदीकोलाई भनिन्छ । तर यो नियोगलाई प्राथमिकता दिइएन । हामीले बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौं । हामीले सुरुदेखि नै २० हजार पठाउनुपर्ने देखिएको छ, थोरै भए पनि उडान नियमित भइदिनुपर्‍यो भनिरहेका छौं । यस्तै भए एउटै कम्पनीबाट पठाउन ६ महिना लाग्ने देखियो । श्रमिक दाजुभाइको गाली हामीले दिनहँॅ खाइरहेका छौं । समस्याबारे लिखित र मौखिक रूपमा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याइसकिएको छ । कार्यान्वयनमा हामी आशावादी छौं । कसलाई दोष दिऊँ ? विदेशी मुलुकमा नेपालीको बिचल्ली भयो ।
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७७ ०६:३३
भाद्र २४, २०७७ ऋषिराम पौड्याल
काठमाडौँ — तीन वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ । कित्ताकाट फुकुवा गरेर सरकारले कृषि जमिन समाप्त पार्ने प्रयास गरेको भन्दै नेकपाको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७७ ०६:३०
संक्रमितलाई टिस्यु पेपरदेखि अक्सिमिटरसम्म
नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी सचिवस्तरमा छलफल सुरु : भारतीय दूतावास
गुल्मीमा जिप खस्दा पाँचको मृत्यु
अपडेटः शुक्रबार, १२ मंसिर, २०७७ । ११ : ३० बजे